‘कर्जाको उच्चतम सदुपयोग आर्थिक मजबुतीको एउटा आधार हो’ SULSULE:A Truly Nepali News Portal
प्रेमबहादुर पाठक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., रूपन्देही
पछिल्लो समयमा लघुवित्त क्षेत्रमा चर्चा बटुल्न सफल प्रेमबहादुर पाठक उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रूपन्देहीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । २०२९ सालमा बाग्लुङमा जन्मिएका विभिन्न लघुवित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउनुको साथै लामो अनुभव संगालेका छन् । २०५४ सालबाट असिस्टेन म्यानेजरको पदबाट लघुवित्त क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पाठकले २०७० साल माघबाट उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । महत्वपूर्ण योगदानकै कारण उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई शिखरमा पु-याउन सफल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमबहादुर पाठकसँग जनमञ्च साप्ताहिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
संस्थाको वित्तीय प्रगति अत्यन्तै सबल र सुदृढ छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा आठ करोड ८२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ चुक्तापुँजी, ६४ करोड ४३ लाख ६८ हजार रूपैयाँ निक्षेप संकलन, एक अर्ब ७१ करोड ८३ लाख ४७ हजार रूपैयाँ कर्जा लगानी भई तीन करोड आठ लाख रूपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन भएको छ । भने एक दशमलव शून्य ८८ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ । १५ जिल्लामा ३९ वटा शाखा सञ्जाल मार्फत ३५ हजारभन्दा बढीलाई सेवा प्रवाह भएको छ ।
मर्जरको कुरा चलेको थियो प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो ?
अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्वमा अवस्थित सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगको मर्ज प्रक्रिया सैद्धान्तिक सहमति भई डिडिए भैसकेको छ । साधारणसभाबाट पारित भई अन्तिम स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पठाएका छौँ । सम्भवतः चैतको पहिलो सातासम्म एकीकृत कारोबार हुन्छ ।
मर्जपश्चात् संस्थाको पुँजीगत संरचना कस्तो हुन्छ ?
मर्जपश्चात् १४ करोड ९५ लाख चुक्तापुँजी, दुई अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी, ७५ करोड निक्षेप संकलन हुनुका साथै ५५ वटा शाखा कार्यालयहरू २५ जिल्लामा अवस्थित हुन्छन् ।
राष्ट्रियस्तरको एकल प्रयास नै पर्याप्त भएको समयमा मर्जको योजना कसरी बनाउनुभयो ?
संथागत विकासकै लागि राष्ट्र बैंकले सबै कुराहरूको सुक्ष्म अध्ययनपश्चात् मर्जर नीति ल्याएको होला । अहिलेकै परिवेशमा विद्यमान नियम कानुनअनुसार हाम्रा सबै मापदण्डहरू पूरा हुन्छन् । अप्रेसनको पाँच वर्ष पूरा हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्रका सबै जिल्लामा शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरेको हुनुपर्ने, दश करोड चुक्तापुँजी हुनुपर्नेलगायत सबै प्रकारका मापदण्डहरू पूरा भएको अवस्थाले हामीलाई थप ऊर्जावान बनाएको छ । ऐन, नियम र सबै मापदण्ड पूरा भएपछि राष्ट्रियस्तरको लागि हामीलाई कुनै प्रकारको समस्या उत्पन्न हुने अवस्था नभए पनि नियमनकारी निकायको योजना तथा संस्थागत हकहीत, मजबुतीको लागि मर्जर प्रभावकारी माध्यम भएकोले मर्जको बाटोलाई अवलम्बन गरेका हौँ ।
मर्जको लागि सर्लाही नै पुग्नुको कारण के हुनसक्छ ?
हेर्नुस् मर्जरमा दुईवटा स्कुल अफ थर्ड निर्माण गरिएको छ । एउटा स्कुल अफ थर्ड भनेको कार्यक्षेत्रभित्रकै संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्ने हो भने, अर्को कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको सँग मर्ज गर्ने हो । हामीले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको संस्थालाई रोज्यौँ । यही कार्यक्षेत्रका संस्थालाई रोज्दा हाम्रा कार्यक्षेत्रहरू जुधिरहेको अवस्था थियो । त्यसैले दोस्रो विधिले हामीलाई धेरै विकसित बनाउने हुँदा पहिलो विधिलाई छोड्यौँ । एकै क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरू मर्ज प्रक्रियामा जाँदा धेरै कुराहरूमा डुब्लिकेशन समस्या हुने हुँदा फरक क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थालाई पाटर्नरको रूपमा रोजेका हौँ ।
मर्जपछि कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुभएको छ ?
कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति ठूलोरूपमा लिनुपर्ने अवस्था छैन । दुवै संस्थाहरू धेरै विभागहरू नभएको अवस्थामा प्रारम्भिक समझदारीमै कुनै कर्मचारीलाई पनि समस्या नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने समझदारी भएको छ । जबसम्म कर्मचारीको मनोबल बढ्दैन तबसम्म संस्थालाई अगाडि बढ्न समस्या हुने हुँदा सबैलाई चित्त बुझ्नेगरी व्यवस्थापन मिलाउने भएका छौँ ।
नेतृत्व कुन पक्षले सम्हाल्छ र मुख्य कार्यालय कहाँ रहन्छ ?
प्रधान कार्यालय रूपन्देहीमै रहन्छ । नेतृत्व उन्नतिले सम्हाल्छ । उन्नतिको सञ्चालक समीति अध्यक्ष मर्जपछि पनि अध्यक्ष रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मर्जपछि पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसैगरी सहकार्यका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुका साथै संस्थाको नाम उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहन्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूले नम्सअनुसार काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छन् नि ?
नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणको लागि लघुवित्त संस्थाहरूले प्रभावकारी औजारको रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा उदाएका छन् । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै गरिबी न्यूनीकरणको लागि लघुवित्तहरूले ठूलो योगदान पु-याएका छन् । नेपालमा यति धेरै संख्यात्मक हिसाबले हो होइन भन्ने एउटा पाटोे हो । राष्ट्र बैंकले अन्य तीन वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स रोकेको छ । भने लघुवित्त क्षेत्रमा पाइपलाइनमा रहेका संस्थाहरूलाई अनुमति दिँदा संख्यात्मक हिसाबले लघुवित्तको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बजारमा लघुवित्त संस्थाहरूको सेयर भ्यालु बढी छ । त्यसमा माग बढी र आपूर्ति कम छ । समग्र लघुवित्त इण्डष्ट्रिजलाई हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था राम्रो छ । बेथिति, विसङ्गति, कल्चर, कर्जा मिसयुज अर्थात् जुन क्षेत्रको लागि कर्जा लिएको हो त्यो क्षेत्रमा नलगाएर विलासी क्षेत्रमा लगाउनेजस्ता धेरै कुराहरूमा पछिल्लो समयमा संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा नियमन गरेको अवस्था छ ।
सेवाग्राहीको लापरवाहीले बीचको केही समयमा कम प्रभावकारी देखिएको अवस्था थियो । अहिले लघुवित्त क्षेत्रको मजबुतिको लागि राष्ट्र बैंकले वानथर्डमा झार्ने योजना अगाडि सारेको छ । जुन लघुवित्त क्षेत्रकै लागि खुशीको कुरा हो । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले संस्थालाई दिगो दरिलो प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । देशभर लघुवित्त क्षेत्रको उपस्थिति भैसकेको अवस्थामा कसरी हुन्छ प्रभावकारी ढंगबाट सेवाप्रवाह गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्नु पर्ने जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ ।
लघुवित्त कर्जा रकम थोरै भयो आँटेको काम पनि राम्रोसँग गर्न सकिँंदैन भन्ने सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेको सुनिन्छ वास्तवमा के हो ?
तोकिएको मापदण्डअनुसारको कर्जा नपुग्ने अवस्थको छजस्तो लाग्दैन । यहाँले भनेजस्तो लघुवित्तबाट लिएको कर्जा अन्य विलासिताका क्षेत्रहरूमा नलगाएको भन्ने पनि छैन् । सबै सेवाग्राहीले कर्जा मिसयुज गरेका छैनन् । थोरै पैसा लिएर थोरै थोरै गर्दै धेरै गरेका उदाहरण पनि तमाम छन् । कर्जा लिनेबेलामा सेवाग्राहीले आफ्नो परियोजना पेश गर्नुहुन्छ । त्यसमा लागत कति लाग्ने कस्तो प्रकृतिको हो सबै खुलाइएको हुन्छ ।
हामी पनि त्यसको अध्ययन गरेर कति लगानी चाहिन्छ आवश्यकताअनुसारको कर्जा दिएका हुन्छौँ । परियोजनाले एक लाख माग्यो भने एक लाख नै दिन्छौँ तर अन्य विलासी क्षेत्रमा खर्च गर्ने, गहना किन्ने, महँगा–महँगा मोबाइल किन्ने सेवाग्राहीहरूको हकमा कर्जा नपुगेको हुन सक्छ । त्यस्तो खालको कर्जाको लागि लघुवित्तमा कुनै स्थान छैन । होइन भने परियोजनाले मागेअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कर्जा प्रवाह गरेका छौँ ।
संस्थामा सेवाग्राहीको डुब्लिकेशनले कत्तिको प्रभाव पार्दछ ?
धेरै पार्दछ । डुब्लिकेशन अर्थात् दोहोरोपना नै लघुवित्त संस्थाहरूको मुख्य समस्या हो । दोहोरोपनाभन्दा पनि बहुपना भएको छ । जुन कुराले प्रत्येक लघुवित्त संस्थालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ । २२/२३ वर्षको लघुवित्तको अनुभवको कुरा गर्दा नगन्यरूपको दोहोरोपनाले संस्थालाई त्यति धेरै प्रभाव पार्ने देखिँदैन । किनकी संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सानो भोलुमको हुन्छ । भनेको सयमा नतिर्नु एउटा पक्ष भए पनि तिर्दै तिर्दिन भन्ने अर्को पक्ष हो । सबै परिवार मृत्युवरण भएको अवस्थामा अपवादको रूपमा प्रसङ्गहरू निष्किए पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा लघुवित्त संस्थाहरूको अशुलीदर राम्रै छ । समग्र लघुवित्त इण्डष्ट्रिजलाई हेर्दा भाका नागेको कर्जा संकलनको अवस्था राम्रो छ ।
चर्को ब्याजदरका कुराहरू पनि बेलाबेलामा सुनिने गरेका छन् नि ?
मलाई लाग्छ, ब्याजदरको इस्यु अन्य ठाउँहरूबाट ल्याइएको हो । समग्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको ब्याजदर विगतमा जस्तो छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि धेरै नियमन गरेको अवस्था छ । लागत १० हुँदा प्रशासनिक खर्च तीन प्रतिशत र छ प्रतिशत स्प्रेड जोडेर १९ प्रतिशतसम्म लिन पाउने राष्ट्र बैंकको मापदण्ड छ । लघुवित्त संस्थाले पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा महँगो पर्न जान्छ । हामीले पनि पछिल्लो समयमा १३/१४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर कर्जा लगानी गर्दा राष्ट्र बैंकको अधिकतम मापदण्डभित्र रही ब्याजदर निर्धारण गरिएको हुन्छ । यहाँले भनेजस्तो विगतमा थियो तर वर्तमानमा छैन । भन्दा जे भनिए पनि वास्तविकतामा त्यो छैन ।
अन्त्यमा उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्थाका भावि योजना के–के छन् ?
पहिलो त राष्ट्रियस्तरको बन्नेछ । संस्थालाई दिगो दरिलो बनाउनको लागि मर्जरपश्चात् एक अनुपात एक हकप्रद सेयर जारी गर्दै छौँ । हकप्रद सेयरपछि २९ करोड ९० लाख संस्थाको चुक्तापुँजी पुग्नेछ । ‘ग्राहकमैत्री नवीनतम लघुवित्त सेवा’ हाम्रो मुख्य नारा हो । यो स्लोगनलाई आत्मसात गर्दै कसरी ग्राहकमैत्री बन्न सक्छौँ त भनेर अगाडि बढ्नु नै मुख्य उद्देश्य हो । त्यसको लागि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याउँदै आधुनिक युगअनुसारको सेवा प्रवाह गर्ने । अहिले लघुवित्तको ठूलो चुनौती भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो । त्यसलाई कसरी हुन्छ मजबुत बनाउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यही खालका प्रशिक्षणहरू दिनेलगायतका कामहरू गर्दै चुस्त राम्रो र सबैको मनमष्तिस्कमा बस्ने लघुवित्त संस्था निर्माण गर्नेगरी सञ्चालित छौँ । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)